Cabdi Ileey oo Markale isagoo bahdilan kasoo muuqday Maxkamd ku taal Addis Ababa "Hala icafiyo Dambi ma aanan geline". - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeWararka MaantaCabdi Ileey oo Markale isagoo bahdilan kasoo muuqday Maxkamd ku taal Addis Ababa “Hala icafiyo Dambi ma aanan geline”.
Cabdi Ileey oo Markale isagoo bahdilan kasoo muuqday Maxkamd ku taal Addis Ababa “Hala icafiyo Dambi ma aanan geline”.
October 31, 2019 marqaan Wararka Maanta 4
Madaxweynihii hore ee Ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ka soo muuqday Maxkamad ku taalla Magaalada Adis ababa ee dalka Itoobiya.
Cabdi oo fursad loo siiyay in uu hadlo ayaa sheegay intii uu maamulayay Ismaamulka Soomaalida uu si wanaagsan u maamulay wax dambi ahna uusan ka gelin degaanka Soomaaliya.
Maxkamadeyntiisa oo shalay dhacday ayaa waxaa uu ku dalbaday in la siidaayo maaddaama uusan gelin wax dembi ah oo uu galay intii uu hayay talada Ismaamulka Soomaalida.
Maxkamadda ayaa amar ku siiyay Booliska Itoobiya in ay si deg deg ah u baahiyaan magacyada iyo sawirrada todobo qof oo kale oo loo heysto in ay qeyb ka ahaayeen dil, kufsi, barakicin iyo dhibaatooyin kale oo ka dhacay magaalada Jigjiga.
Ilaa 50 qof ayaa u xiran rabshadihii ka dhacay Jigjiga Bishii August ee 2018,waxaana dhamaan loo heystaa in ay ka dambeeyeen rabshadahaas.
Waxaa ku geeriyooday 58 qof,waxaa sidoo kale lagu baabi’iyay hanti gaareysa ilaa 421Milyan oo Birta Itoobiya ah sida laga sheegay Maxkamadda.
Cabdi Maxamuud Cumar ayaa dalbaday in xorriyaddiisa dib loo siiyo maaddaama uusan jirin dambi cad oo uu ka galay Ismaamulka Soomaalida.
QM oo markale shaacisay in la filayo saamayn aan horay loo arag oo kusoo kordha Fatahaadaha hadda laga Cabanayo.
Degdeg:- Dad kasoo cararay Silaca Alshabaab oo orod kusoo galay Baydhaba.
Cabdi Maxamuud Cumar, waxaad u timid degaan iyo shacab kala daadsan oon madax rasmiya lahayn, waad uruurisay oo isku duwday ILAAHAY SWT amarki, waxaad ka soo saartay Dad iyo Degaan jira oo lagu soo hirto, ummad aan israbin baad walaalaysay, kuwii shacabkaa meeshay ku arkaamba silsiladaha ku xirxiri jiray iyo jabhadihi sii kala jeeday Ayyaa ku soo Xirtay maamulkaaga, guri laga kala tegay ayyaa maanta noqday meel lagu soo hirto, waxaa beryay WAA horumar oo ka sareeya kuwo la steeg sheego oon horumar gaarin, Majeerteenland iyo Isaaqland ayyaan maanta gaariin Ogaadeenya. °Mustafa Cagjar waxaan leeyahay; “Adeer ma rabno dagaalkaage oo rajjaan kaa qabnaaye ISKA ILLOW wixii idin dhexmaray ina ILEEYE noo soo DAA. °WAA CODSI KA YIMID ODAY AY XUDUNTIISI TAAL BUSLE. WBT
Waa Run Cabdi maxamud cumar iley in uu wax qabtay Laakin wuxuu dhibaato keenay ayaa iyadana ka badan oo dambiyaal waaweyn noqday.
Waa Diidanahay in nin la yiraahdo waxbaad hagaajisay laakin dad badan baad dishay qaarna xabsiga ku ilowday, Taasu wax hagaajis ma aha.
Somalidu waa arimaha ay isku khalado, maxaa loo waayey nin wax hagaajiya isagoo aan wax dilin ama wax xidhin ama dhibaato geysan.
waa maxay sababta ayu u doonayno in aynu helno qof wax hagaajiya xita haddu wax xasuuqayo.
Caqliga somalidu waa Caano Barxay !!
In uu wax badan soo qabtay Cabdi Cumar shaki kuma jiro.Isla markaas aad iyo aad baa loogu eedaynayaa wax yaalo la yiri wuu geystay.Soomaaliyeey midbaanse idiin sheegayaa oo ah soomaali waxaa xukumi kara dawlad ay ka baqaan.War dawlad an shacabku ka baqin dawlad ma aha.War waa la soo ogaaday oo dawlad an dadku ka fiigin wax ma qabato muran iyo eedayna kama baxdo.Iska ilaawe dimoqoraadi iyo sheeko baralayda ay dad ku qaraabtaan.Dawladu waa in ay shacabkeeda edbisaa waxay u qaban kartana u qabataa.Dawlad makhaayadaha been looga faafiyo dawlad wax ku ool ah ma noqoto.Dawladu waa in ay xukun adag tahay.Waana in ay u dalkeeda iyo dadkiisa intii karaankeed ah.Kama wado dawladu ha layso dadkeda.Maya oo saas ma aha ee waa in uu shacabku ka baqaa nidaamka ay dawladu ku shaqayso.Say sheegeen nimanka kor ka hadlaya Cabdi Cumar ujeedadiisu waxay ahayd hirgali dawlada awood iyo wax qabad dhab ah la timaada.Taasna uu ku dadaalay,laakiin dad badan baa la garan waayey.
Dab la Riday wali ma waxuu ku hayaa waxaa ahay Ugaas iyo Caaqil muhiima?War waxaad tahay Qaaqle iyo Seef la bood ee dadkaaga dhinac ka raac.
Kaftan dhab ha moodin.
Dalka Itoobiya waxaa weligiiba kasocday hadana weli kasocda dagaalo siyaasadaysan oo kusalaysan isir iyo diin, goob dagaal kasocdo in dad kudhinto hantina kuburburto waa miraha kaliya ee laga gurto Geedka colaadda,
Cabdi maxamud Cumar maamulkiisii kahor dadbaa lagu dilayay Itobiya iyo Soomaaliya guud ahaan, weli dadkii waa lagudilayaa Itoobiya iyo Soomaaliya, dadkii katirsanaa maamulkii cabdi maxamud Cumar heer Fadaraal, heer deegaam iyo guud ahaan Soomaaliya iyo Itoobiya weli waxay maamulaan Dalka Itoobiya,
Maxaa Cabdi maxamud Cumar iyo kooxda yar ee laxiran lagu haystaa?